राष्ट्रवादी नेताको खाँचो :: चित्र केसी – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२१ असार २०७७, आईतवार २३:५६ English
राष्ट्रवादी नेताको खाँचो :: चित्र केसी
मुलुक दिनप्रतिदिन अधोगती तिर जादै छ, जनताका समस्या विकराल हुँदै गएको छ। चुनाब को मिति घोषणा भए पनि निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने कुरामा स्वयम राजनैतीक पार्टी का नेताहरु नै अन्योलमा छन्। उनीहरु आफ्नो अनुकुलमा चुनाव गराउने र आफ्नो पक्षमा मत लिने ध्याउन्नमा मात्र लागेका छन्। आफ्नो पक्षमा मत र जित सुनिस्चित नभए सम्म कुनै पनि हालतमा चुनाव हुन नदिने खेलमा एमाओबादीको मनसाय देखिन्छ। माओवादीलाई पनि पार्टी बिभाजन पछि आफ्नो पक्षमा जीत सुनिस्चित हुने कुरामा शंका छ। जबसम्म एमाओबादीले आफ्नो अनुकुलमा मत आउने सुनिस्चित ठान्दैन तब सम्म नेपालमा निर्वाचनको कल्पना नगर्दा हुन्छ।
अर्कोतिर पहिलाको संबिधानसभा जुन कारणबाट बिघटन भएको थियो त्यो मुद्दा र बिषय बस्तुलाई हल नगरि चुनाव घोषणा गर्नुले पनि फेरी संबिधान बन्ने कुरामा ढुक्क हुने आधार केही देखिदैन। मुलुकका कतिपय भागमा दैबी प्रकोपले गर्दा नागरिकहरु सडकमा दिन बिताउन वाध्य छन्। अरबौ सम्पत्तिको नोक्सान हुन पुग्यो। यस्तो अवस्थामा हिजो जनता को लागि भनेर १५ हजार निर्दोस नेपाली नागरिकको ज्यान बलिदान गरेर आएको माओवादी पार्टी जस्ले आफुलाई सर्बहारा मज्दुर र दुखी गरीबको पार्टी भनेर दावा गर्दछ तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको जति उदारता पनि देखाउन सकेन। ज्ञानेन्द्रले २५ लाख सहयोग गरे भने पुष्पकमल दाहालले सहयोग गर्नु त परै जाओस उल्टै सरकारलाई हेलिकोप्टर मिलाइदिन भनेर बिन्ती गरे। आखिरमा पुष्पकमल दाहालले पीडितलाई अबलोकन गर्दैमा उनिहरुले रात पाउने होर? बरु बैंक र नेपाली जनताबाट लुटिएको अरबौ सम्पत्ति, जुन पीडित नेपालीलाई पार्टीको तर्फबाट यती सहयोग भनेर दिएको भए बल्ल जनताप्रती गरेको सदासयता झल्कनेथियो।
अब पनि नेपाली जनता माथि हरेक कुरामा पार्टीबाट यस्तै तरिकाले हेल्चेक्र्‍ाइ गर्दै जाने जनताको समस्याप्रति र राष्ट्रप्रति कुनै जिम्मेवार बहन नगर्ने हो भने मंसिर ४ गते पछि मुलुकको अवस्था झन गम्भिर हुन जानेछ। नेपालमा साचिकै अहिले सम्म बिपी कोइराला र मनमोहन बाहेक राष्ट्रको लागि बोल्ने नेता हुन सकेन। सबै भन्दा राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वाधिनताको चर्को कुरा गर्ने एमाओबादी सबै भन्दा नतमस्तक हुँदै राष्ट्रियताको सबालमा निकै चुकेको छ। आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्छ भने उस्ले जे जस्तो राष्ट्रघात काम पनि गर्दछ भन्ने कुराको उदाहरण पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको व्यबहारले नै प्रमाणित गरिसकेको छ। एमाओबदिको नेता जुन कुरा गर्छन् त्यो नगर्ने र जहिले पनि नेपाली जनतालाई अल्मलाउने र राष्ट्रहित भन्दा पनि पार्टी र आफ्नो ब्यक्तिगत हितमा लाग्नाले यो अवस्था सिर्जना भएको हो। संबिधान सभाको निर्वाचनमा सबै भन्दा ठुलो पार्टी भएर एमाओबादी आउनु नै मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन गयो। उस्ले संबिधान निर्माण गर्ने भन्दा पनि १० बर्से युद्दमा बोलेका कुराहरु संबिधानमा लेखेर मुलुकलाई एकदलिय अधिनायकबाद तर्फ लैजान चाहन्थ्यो, जुन कुरा नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई स्विकार्य भएन। तसर्ह संबिधान बन्न सकेन फेरी पनि उही अवस्थाको पुनराबृती हुन गयो भने उही अवस्था दोहोरिने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले यस्को लागि नेपाली जनता सुझबुझका साथ लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई मत दिएर संबिधान बनाउन मद्त गर्नु पर्दछ।
अर्कोतिर युवा नेताहरु पनि सधैं भरी शिर्स नेताहरुले काम गर्न दिएनन भनेर बिरोधको नाममा बिरोध गर्नु भन्दा पनि नेपाली जनताको समस्या र राष्ट्रप्रतिको गहन जिम्मेवार बिषय बस्तुलाई सम्बोधन गरेर अगाडि आउने आट प्रस्तुत गर्नुस् तपाईंहरुलाई जनताको साथ हुने नै छ। अब जनतालाई भाषण र चिप्ला कुरा गर्ने भन्दा पनि राष्ट्रसेबक नेताको खाचो परेको छ। जुन ब्यक्तिले अथवा नेताले अलिकती जनताको मुद्दा र राष्ट्रियको मुद्दालाई लिएर जनता सामु जाने आँट गर्दछ निस्चित रुपमा त्यही ब्यक्ति नै जनताको नेता बन्न जानेछ। यो कुराको लागि जोखिम र आत्मबल साथ आउन सक्नु पर्दछ। अब राष्ट्रको लागि भेनेजुएलाको पूर्व राष्ट्रपती ह्गोज चाबेज र ईरानको राष्ट्रपती मोहमदिनेजाद र पूर्व क्युवाको राष्ट्रपती फिदेल कास्ट्रो जस्तो राष्ट्रको लागि कसै सँग नझुक्ने आफ्नो स्पस्ट कुरा राख्ने महान नेताको आबश्यकता छ अब मुलुकमा। नत्र भने माओवादी नेताको जस्तो खोक्रो राष्ट्रबाद्को कुरा मात्र गरेर जनतालाई झुक्काउने काम कसैबाट पनि नहोस्। सर्बहाराको नाममा राजधानीमा आलिसान भब्य महल सिर्जना गर्ने कमिसनतन्त्रमा लागेर देशलाई नै डुबाउने खेलमा बढी नै सर्बहारा पार्टीका नेताहरु नै लागेको देखिन्छ।
नेपाल भन्दा पछी स्थापना भएका अन्य मुलुकहरुको जनताको आर्थिक अवस्था कहाँ पुगिसक्यो तर नेपालको अवस्था झन गिर्दो छ। नेपाली जनताको अवस्था दिन्प्रतिदिन खस्किदो छ भने पार्टीको त्यो पनि बिशेष गरिकन आफुलाई सर्बहारा भन्ने पार्टीका नेताहरु आफुलाई पुस्तौ पुग्ने गरी पैसा कमाउने खेल्मा तल्लिन छन। नेपाली जनताको समस्या समाधान र देशको बिकासको लागि किन राजनैतीक पार्टीमा एक मत हुन सक्दैन साच्चिकै सबै पार्टी जनताको हित र भलाइको लागि हो भने। देस बनाउने हो भने सबै पार्टीका नेताहरुको स्पस्ट भिजन आउनु पर्दछ आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थ लाई प्रसय दिनु हुँदैन,जनता को आँसु पुछन सक्नु पर्दछ। जनता र देशको चराऐरहेको घाउमा मलम लगाउने नेताको खाचो छ अपरिहार्य छ।
१९ असार २०७०, बुधबार ०६:१६ मा प्रकाशित